Wednesday August 03, 2016 - 01:13:35 in Wararka by Web Admin
Afti ururin laga sameeyay wadanka Denmarka ayaa muujinaysa in qaar badan oo ka mid ah shacabka wadankaas ay aaminsanyihiin in Denmark iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka ay dagaal kula jiraan diinta Islaamka. Aftidaan oo ay samaysay shirkad lagu m
Afti ururin laga sameeyay wadanka Denmarka ayaa muujinaysa in qaar badan oo ka mid ah shacabka wadankaas ay aaminsanyihiin in Denmark iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka ay dagaal kula jiraan diinta Islaamka. Aftidaan oo ay samaysay shirkad lagu magacaabo Megafon ayaa muujinaysa aragtida 33% ka mid ah shacabka wadankaasi.
Dadka wareysiga ka qeyb qaatay ayaa la waydiiyay in ay u arkaan in Denmark iyo wadamada reer galbeedku ay dagaal kula jiraan diinta Islaamka. Dadka wareysiga ka qeyb galay ayaa 33% ku jawaabay haa, halka 56% ay ku jawaabeen maya iyo 11% ku jawaabay ma ogi.
Dadka waayeelka ah ayaa u badan ku u arka in Denmark ay dagaal kula jidho Islaamka. Shacabka iyo dowlada Denmark ayaa sanadihii dambe noqday kuwo naceyb u qaba Islaamka iyo Muslimiinta, iyadoo wadankaasi ay ku soo badatay cunsuriyada ka dhanka Muslimiinta.